OWASEMANDENI UKUBEKA EQHULWINI UKUHANJISWA KWEZIDINGO – SIVUBELAINTUTHUKO
UMEYA woMkhandlu waseMandeni, uKhansela Thabani Mdlalose usenze isibophezelo sokuthi bafuna ukubumba uhlobo loMkhandlu onamandla nobumbene nozobonakala ukwazi ukuthi umelane nomsebenzi owuhlalele.
UKhansela Mdlalose ubekade ethula inkulumo enohlonze njengoba lo Mkhandlu ubukade unomhlangano omqoka wokubhunga ngezinto eziwumgogodla wokusebenza kwawo. Lo mhlangano ubumayelana neqhinga elizosetshenziswa uMkhandlu ngenhloso yokuqhubeka nokusebenzela abantu.
Lo mhlangano uthathe izinsuku ezine ezigcwele ubukade ubanjelwe eChampagne Sports Resort eDrakensberg. Kube kuningi okubalulekile okubhungwe ngakho kuwona.
Elinye lamaphuzu abe seqhulwini ukubaluleka kokuphuthunyiselwa kwezidingo kumalunga omphakathi, ikakhulukazi kusuka kunyaka ka-2022 kuya ku-2026.
UKhansela uMdlalose uthe okumqoka ukuthi kusetshenziswane ukuze kuzozuzwa kalula umbono woMkhandlu ka-2030.
“Sifuna ukuqinisekisa ukuthi siba uMkhandlu ohamba phambili ekwenzeni uguquko ezimpilweni zabantu esibaholayo. Sifuna ukuhamba phambili ekuqinisekiseni ukufezeka kwephupho loMkhanddlu lika-2030. Lokho kuchaza ukuthi kumele sibonakale sibumbene kukhona konke esikwenzayo,’’usho kanje.
Eqhuba uthe ukusebenza ngokubambisana nangokubekezelelana kumele kube yinto ebonakala iseqhulwini kuMkhandlu.
UKhansela uMdlalose uthe kukhona konke okwenziwayo kumele kukhunjulwe ukuthi ngabantu baseMandeni okumele babekwe phambili futhi bacatshangwe ngoba yibona okumele babonakale bezuza kokwenziwa uMkhandlu.
“Kumele siqinisekise ukuthi sisebenza ngokubambisana nangokubekezelelelana. Kumele sikhumbule ukuthi kumqoka kangakanani ukufinyeleliswa kwezidingo zomphakathi kubantu bakithi,’’usho kanjena.
Uthe iqhinga lohlelo oluzosetshenziswa ukufeza izinhlelo zoMkhamdlu kumele lingalibaleki noma ngabe sekunzima kangakanani. Leli qhinga uKhansela Mdlalose uthe yilona elizobonakala lisebenza ekutheni kufinyeleliswe kalula kubantu izidingo.
Uthe zonke izincomo ezenziwe kulo mhlangano zizobe sezibekwa etafuleni uma uMkhandlu sewuhlezi uphelele. Ugcizelele ukuthi okumqoka ukuqinisekisa ukuthi zonke izincomo zibonakale ziphumelela.
Uthe banethemba lokuthi uma sebexhumana nabasemabhizinisini abasebenzisana nabo bazokuqonda okuhloswe ukuzuzwa uMkhandlu ngenhloso yokuhlomulisa abantu bakule ndawo.